अर्थोपेडिक फिजियोथेरापी भनेको के हो ?
Home स्वास्थ्य अर्थोपेडिक फिजियोथेरापी भनेको के हो ?
फिजियोथेरापीले शारीरिक अभ्यासबाट रोगको उपचार र रोकथामका साथै बिरामीलाई परामर्श दिइन्छ ।
बिरामीलाई प्यारालाइसिस भएको छ, माशंपेसी कमजोर छ भने यस्तो करेन्ट प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि ‘फ्याराडिक करेन्ट’ बढी प्रयोग गर्नुपर्छ । यो करेन्ट प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई प्रयोग गरिन्छ । तर, विद्युतीय उपकरणको गलत प्रयोगले भने झन् बढी समस्या आउन सक्छ । त्यसैले हरेक उपकरणको प्रयोग गर्दा मात्रा, अवधि र इन्टेन्सिटी अनुसार चल्नुपर्छ । कति मात्रा दिने, कति समयपछि दिने र फेरि कसरी दिने भन्ने कुरा फिजियोथेरापिस्टले ध्यान दिनुपर्छ ।
सिरियालाई फेरि अमेरिकाको चेतावनी
केन्द्रीय बैंक परम्परागत शैलीमै